Oru oru nke Infographic Production | Martech Zone
Tọzdee, Febụwarị 21, 2013 Tọzdee, Febụwarị 21, 2013 Jenn Lisak Golding
Ijikwa mmepụta ihe maka ndị ahịa m DK New Media na maka Martech Zone, Amụtawo m ihe ma ọ bụ abụọ banyere ịmepụta infographics. Ọ na-ewe oge iji melite arụmọrụ gị na imepụta oge. Mmepụta Infographic nwere ike were izu ma ọ bụ ọnwa iji mepụta ma ọ bụrụ na ịnweghị atụmatụ kwesịrị ekwesị ebe, ma ọ bụ arụmọrụ kwesịrị ekwesị. Ndị a bụ aro ole na ole iji (olile anya) belata oge ma mee ka ị gaa n'ụzọ.
1. Brainstorm a "òkè kwesịrị" echiche.
Ma ị na-ewepụta akwụkwọ ozi maka ndị ahịa ma ọ bụ maka azụmaahịa gị, ịkwesịrị iwepụta isiokwu ga-arụ ọrụ maka azụmaahịa a. Bụ “oke kwesịrị” gụnyere ihe ole na ole:
Ọ dị ọkụ? Sizzle.
O gbara gburugburu isiokwu “ruru eru”?
Ozugbo i nwere echiche, mepụta ohere di na nwunye. Gbaa mbọ hụ na ha rịọrọ ahịa gị ga-amasị gị nakwa na ha gụnyere Keywords na aha. 3 - 5 okwu ntinye okwu na-arụ ọrụ kacha mma. Omuma atu: Ihe omuma anyi ohuru gunyere isi okwu “mobile ọdịnaya ahịa, ”Ma akpọ ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị iji dọta clickthroughs.
Echiche: Biko, biko, biko echela ihe a. Nke a agaghị ewe otu izu iji chọpụta ma zoo ya na onye ahịa gị (ma ọ bụ n'ime).
2. Nnyocha, nyocha, nyocha.
Ọ dị mkpa karịa ịnweta data ịdọpụta karịa karịa ezughị. Bịa na ndepụta mgbo nke ụdị stats ị na-achọ. Enwere ego bara uru nke ga-apụ wee nweta data maka gị. Ma ị nwekwara Internetntanetị na mkpịsị aka gị. Wepụ oge ụfọdụ iji pụọ ma nyochaa isiokwu ị kpebiri.
Nchoputa nyocha: Enwere m ike ị copomi na ịdekọ njikọ niile ịchọtara bara uru na dọkụmentị, wee laghachi ma nyochaa njikọ ọ bụla site na ya. Detuo na mado ozi sitere na njikọ ndị ahụ ịchọtara dị mkpa na doc ahụ, tinyezie njikọ ahụ n'okpuru data sitere na isi mmalite ahụ ka ị wee mara ebe esiri ya (nke a ga-adị mkpa ma emechaa).
3. Oge akụkọ!
Nke a bụ usoro m iji mepụta akụkọ njikọ:
a. Ozugbo i mechara nyocha ahụ, gaghachi ma gụchaa akwụkwọ ahụ dum. Gịnị ka a chọrọ? Gini bu “meh”? Naanị gụnye ihe ị chere na-akpali akpali n'ezie, belụsọ na stats na-akwado ya dị oke mkpa iji gosipụta mkpa nke ụfọdụ ụkpụrụ. Gbaa mbọ dezie ọdịnaya ka ọ dịrị na “olu gị,” mana gbaa mbọ hụ na ọ ka gosipụtara ihe ọnụọgụ na-ekwu na enweghị mgbagwoju anya.
Ndụmọdụ ọdịnaya: Lelee ogologo doc ahụ. Ọ bụrụ na ọ karịrị peeji 5 (dịka ike - dabere na eserese ma ọ bụ ederede dị arọ), laghachi ma belata karịa.
b. Mgbe doc na-egbutu, lee usoro nke data. Hụ ma ọ na-akọ akụkọ ma ọ bụ na-emekọ ọnụ. Nchịkọta data ọnụ na ngalaba nwere ezi uche. Debe data kachasị sie ike na ala.
c. ihe Site n'echiche, enwere ozi n'ozuzu ma ọ bụ ịkpọ oku. Kedu ozi kachasị mkpa ịchọrọ ka ndị na-ege gị ntị were na ya? Na okpuru nke ọdịnaya ọdịnaya, tinye paragraf dị mkpụmkpụ ma ọ bụ ahịrịokwu na-egosipụta nke a. N’ime gị onye isi echiche na azụmaahịa gị, chee echiche banyere itinye isi ha na isi n’akụkụ ya iji hazie ya.
4. The fun akụkụ: imewe.
Onye mmebe kwesịrị ịnwe ihe ederede ederede zuru oke na aka, yana aha, usoro ọdịnaya, na ihe onwunwe. Nke a ga - azọpụta oge n’oge a haziri ya. Ihe ọzọ ị ga-agafe bụ ihe atụ nke infographics ị hụrụ ma nwee mmasị ka ha wee nwee ike nweta echiche maka agba na mkpụrụ edemede.
Cheta na ndetu m kwuru banyere itinye njikọ akụ gị n'okpuru ọdịnaya ị dọtara na ha? Mee ka onye na-emepụta ihe tinye akwụkwọ edemede na-esote na njedebe nke data (1, 2, 3) nke ga-atụle njikọ ọdịnaya na ala nke infographic. Lelee nke anyị ahịa nkwado infographic anyị na TinderBox mere iji hụ otu ihe atụ.
Enweghi onye mmebe n’ime ụlọ ma ọ bụ na mmefu ego? Lee ndụmọdụ di na nwunye maka obere ihe omuma ihe omuma.
Atụmatụ atụmatụ: Nye oge, nzaghachi doro anya na imewe ahụ. Ezigbo onye nrụpụta ga-enye gị mpempe akwụkwọ ahụ tupu i mejupụta ozi infographic niile ka ị nwee ike ịhụ ma ọ bụrụ na ha na-aga n'ụzọ ziri ezi. Atụla egwu ịsị “Na-amasị m ihe a mmebe mere ebe a na a infographic” ma ọ bụ “ịgbanwe agba.”
Oge ngụkọta: Ihe ndekọ kachasị mma m bụ izu 3, mana n'ozuzu, ana m ahụ na ọ na-ewe ihe dị ka izu 4-6 iji mepụta ihe ọmụma siri ike. Karịsịa ma ọ bụrụ na gị na onye ahịa na-arụ ọrụ.
Nwee obi ụtọ na ya. Jikere, ma nwee obi ụtọ n'oge ị na-agba ịnyịnya.